महिला रोग चिनाउने सिनेमा :: सुरज सुवेदी :: Setopati
सुरज सुवेदी काठमाडौं, कात्तिक २४
‘ड्राइ’ शब्द भन्यो भने तपाईंको दिमागमा के कुरा आउला?
अझ यसलाई एउटा रोगसँग दाँजेर हेरियो भने के होला? फिस्टुलासँग नि?
विश्वभरमा पाठेघरको फिस्टुला रोगबाट पीडित २० लाखभन्दा धेरै महिला छन्। उनीहरूको लागि ‘ड्राइ’ को अर्थ के होला?
पाठेघरको फिस्टुला भएपछि योनी र पाठेघरको बीचमा प्वाल पर्छ। योनी र मलाशयबीचमा पनि पर्न सक्छ। दिसा र पिसाब अडिँदैन। नियन्त्रणको कुनै उपाय छैन। लामो समय 'लेबर' रोकिएर मृत बच्चा जन्मिन्छ। मानव फोहोर निरन्तर रूपमा उनीहरूको तिघ्रासम्म बग्दै जान्छ। थुप्रिन्छ। दुर्गन्ध आउँछ। नजिकै बसेर कोही पनि कुराकानी गर्न आउँदैन। हालत सोध्दैन। लामो समय सामाजिक बेवास्ताको सिकार भएर उनीहरू संसार छाड्छन्।
धेरै मानिसले नसुनेको एउटा रोगबारे 'नलिउड' (नाइजेरियाको फिल्म उद्योगलाई नलिउड भनिन्छ) मा फिल्म बनेको देखेर खुसी भएँ। तपाईंले फिस्टुलाबारे पहिलोपल्ट कहिले सुन्नुभयो?
शिक्षा साह्रै ठूलो कुरा हो। ती किशोरीलाई आधारभूत शिक्षा मात्र दिन सके उनी सबै व्यवस्था गर्न सक्छिन्। अज्ञात नै रहिन् भने उनलाई के गर्ने भन्ने थाहै हुँदैन। छोरीको बिहे सानैमा गर्न चाहने सबै आमाबाबुलाई छोरी पढाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। हामीले मानिसहरूलाई शिक्षित बनाउन सक्यौं भने यसले त्यस्ता कुरा रोक्न थाल्छ। हामीसँग अहिले नै फिस्टुला भएका धेरै महिला छन्। हामीले अरूलाई यसको समस्यामा पर्नबाट रोक्नै पर्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २३, २०७५, २२:५८:००